Uyilo lwebhokisi yokuthengisa yeXiaomi Mi CC9 ilapha | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Iifoto zebhokisi yokuthengisa yeXiaomi Mi CC9 ziye zavela
Uluhlu olulandelayo lweXiaomi luyaqhubeka nokunika into oza kuyithetha. Kwisihlandlo sokugqibela sichaze eyakho umhla wokukhutshwa, kwaye ngoku sine imifanekiso yebhokisi yakho yokuthengisa enkosi kwisithuba esitsha.
Ngokukodwa, leyo ineenkcukacha yile I-Mi CC9. Eli ligama eliyimodeli eliphambili lesixhobo esitsha esiza kukhutshwa njengemveliso ye intsebenziswano phakathi kweXiaomi neMeitu.
U-Lao Cici Wei, onguMphathi weMveliso wenkampani entsha yee-smartphones, ebephethe umsebenzi wokwabelana, kwiiyure nje ezimbalwa ezidlulileyo, iifoto zebhokisi yokuthengisa esele ikhankanyiwe kwiphepha lakhe le-Weibo. Ke ngoko, sinokuyithemba i-100% yoyilo lwebhokisi kuba ivela kumthombo osemthethweni.
Njengoko siqaphela kakuhle, ibhokisi ikakhulu imhlophe kwaye inekhowudi yoluhlu, ethi 'CC', ebhalwe kwifonti enkulu kakhulu enemibala. Le ikwanophawu lwe'Mi 'kwikona ephezulu ngasekunene kunye' neXiaomi CC9 'ebhalwe ezantsi, ecaleni nasemva kwetyala.
Emva kwebhokisi, ezinye iinkcukacha zefowuni zibhalwe kwiibhokisi ezinemibala emininzi. Akukho sithombe sefowuni kwibhokisi yokuthengisa, kodwa ayothusi kuba inkampani yaseTshayina isisebenzisile kule nto.
I-Xiaomi Mi CC9 kunye neCC9e, ii-smartphones ezimbini ezintsha nezizayo zomenzi waseTshayina ngoku zivuthiwe
Ukuthathela ingqalelo idatha etyhiliweyo ngaphambili, iXiaomi CC9 ine I-6.2-intshi ye-diagonal AMOLED isibonisi esibonisa iminwe yeminwe. Isixhobo sikwaxhotyiswe ngeprosesa Snapdragon 730 ukusuka kwiQualcomm, ukuya kuthi ga kwi-8 GB ye-RAM kunye ne-256 GB yokugcina, kwaye iya kuba nebhetri yamandla angama-4,000 mAh ngenkxaso yetekhnoloji yokutshaja ngokukhawuleza. Lonke olu lwazi kufuneka luqinisekiswe, kunye nexabiso kunye nokufumaneka kwayo kuhlala kusaziwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iifoto zebhokisi yokuthengisa yeXiaomi Mi CC9 ziye zavela
Uhlelo lwe-OnePlus 7 Pro Almond Edition ngoku luyafumaneka eSpain
INokia 1 ifumana uhlaziyo kwiPie yePie